Peach | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Kedu ka peach bara uru maka ahu?
Peach abụghị naanị mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, nke, na-atọ ụtọ ya na juiciness, karịa mkpụrụ kachasị amara, ọ nwere ọtụtụ ihe bara uru, nke na-eme ka ọ bụrụ onye ndu na nhọrọ ntanye. A na - ahụkwa uru nke mkpụrụ a na cosmetology, a pụkwara iji ya mee ihe maka nkwadebe maka ihe nkpuchi, ọkpụkpụ na ihe ndị ọzọ dị mma.
Peach mikpuru: uru bara uru, otu esi kpoo ma chekwaa n'ụlọ
Kwa ma ọ dịkarịa ala otu oge ná ndụ m, m gbalịrị mikpo apricots - akpọrọ apricot, ma ọ bụghị ọtụtụ ndị nụla banyere piich a mịrị amị, bụ nke na-esiteghi na ọ tọrọ ụtọ, kamakwa nri bara ezigbo uru. Taa, ị ga-amụta ihe dị na piich a mịrị amị, ihe uru na nsogbu nke mkpụrụ osisi ndị a. Anyị ga-ekwukwa banyere ị nweta na nchekwa nke ihicha.
Egwu fig: uru na nsogbu
Ihe kacha adọrọ mmasị na piich fig bụ na ọ dịghị ihe jikọrọ ya na mkpụrụ fig. Otú ọ dị, ọdịdị ya dị ka mkpụrụ fig a mịrị amị, dị ka a na-akpọ fig, ma ọ dịghị onye ọ bụla na-akpọ fig piich a. Ebe ọzọ dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, a na-akpọ ya onyinye maka otu ụdị akwụkwọ ahụ.